रात्रिकालीन कामदारको गुनासो : ‘कतै जाऊँ ठाउँ छैन, साहुले फोन उठाउँदैनन्’ राेजगार . समाज . जीवनशैली५९ मिनेट
बाबा रामदेवको दाबी : गुर्जोको रस पिउँदा कोरोना संक्रमण ठीक हुन्छ रामदेवले गुर्जोका साथै अन्य ४ घरेलु जडीबुटीको मिक्स रस पिउँदा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने हुँदा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने सल्लाह दिएका हुन् जीवनशैली . समाचार१५ चैत २०७६
यी हुन् ‘घरेलु एन्टिबायोटिक’ दिनको कडा घामको कारण हाम्रो शरीर आफैंमा तातो हुन्छ भने बेलुका एक्कासी चिसो हुँदा शरीरको स्वास्थ्य सन्तुलन बिग्रन सक्छ । त्यसकारण औषधिको गोली लिनुको सट्टा यस्तो अवस्थामा भान्साकोठामा नै पाइने प्राकृतिक एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुने चिकित्सकहरुको सुझाव छ स्वास्थ्य . जीवनशैली१४ चैत २०७६
कोरोनासँग लड्न के खाने ? यी खानेकुराले बढाउँछ इम्युनिटी पावर घरमै पकाएर स्वस्थ खानेकुरा खाने । जसले रोगसँग लड्ने शक्ति दिन्छ । आवश्यक मात्रामा मसलाहरू खाने हो भने इम्युनिटी पावर बढ्छ स्वास्थ्य . जीवनशैली . समाचार१२ चैत २०७६
'लकडाउन'को आदेश पालना नगरे ६ महिना कैद, के छन् अन्य व्यवस्था ? नेपालमा पनि थप एक जनालाई पुष्टि भएपछि सरकारले रोक थाम तथा नियन्त्रणको लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार प्रकिया अघि बढाउने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराए । जीवनशैली . समाचार१० चैत २०७६
कोरोना जित्ने विकासानन्दका ७ टिप्स यो समयमा घरमा बसेर हाँस्ने, नाच्ने, गाउने, मेडिटेसन गर्ने, प्राणायाम गर्ने, किताब पढ्ने र पोजिटिभ फिल्म हेर्नुपर्छ । यो जिन्दगीभर नगरेको काम गर्ने समय हो । जीवन बदल्ने स्वर्ण काल हो । सबैले सदुपयोग गरौँ जीवनशैली . समाचार९ चैत २०७६
अस्पतालबाटै किन भाग्छन् कोरोना आशंकित बिरामी ? जीवनशैली . समाचार६ चैत २०७६
रसिलो अंगुरका यस्ता फाइदा कालो अंगुरको सेवनले रगतमा कोलेस्ट्रोल को निमार्ण गर्न रोक्छ र मोटोपना बाहेक अन्य स्वास्थ समस्याबाट पनि बचाँउछ । यसले शरीरमा बढी भएको युरिक एसिडको स्तर कम गर्छ जसले किड्नीमा भार बढ्दैन र किड्नी स्वस्थ हुन्छ स्वास्थ्य . जीवनशैली३ चैत २०७६
मोजा गह्नाएर हैरान हुनुहन्छ ? यी उपाय गर्नुहाेस् गर्मीमा धेरैको मुख्य समस्या मोजा वा खुुट्टा गह्नाउने हुन्छ । मोजा वा खुुट्टा गह्नाउने समस्याका कारण कुनै नयाँ ठाउँमा जुत्ता खोलेर जान पनि निकै समस्या हुने गर्छ जीवनशैली२ चैत २०७६
सफा र स्वच्छ खाना बनाउन यस्ता कुरामा ख्याल गरौँ खानामा पाइने पोषक तत्वले मानिसलाई मात्र नभई विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुहरूका लागि पनि वृद्धि विकासमा सहयोग गर्दछ । यस्तै, खानेकुरा प्रशोधन र उत्पादन हुने भान्छा सफा नभएको खण्डमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउन सक्छ । त्यसैले यी कुराहरुमा ध्यान दिऔं स्वास्थ्य . जीवनशैली३० फागुन २०७६
१५ मिनेटमै निखार ल्याउने मुंग दालको फेसप्याक व्यस्त जीवनशैलीसँगै सुन्दर हुने रहर सबैको हुन्छ । तर, सुन्दर बन्नका लागि पार्लर गइरहने समय निकाल्न समेत मुस्किल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घरमै केही उपाय निकाल्न सकियो भने समयको सदुपयोग, पैसाको बचत सँगै आर्कषक बन्न सकिन्छ । यसका लागि मुंग दालको फेस प्याक उपयोगि बन्न सक्छ जीवनशैली२८ फागुन २०७६
अदुवापानी: महिनावारीको पीडा कम गर्नदेखि तौल घटाउनसम्म उपयोगी अदुवाले विभिन्न रोगहरुलाई पनि निको पार्दछ । अदुवा मात्रै होइन् अदुवापानीलाई नियमित रुपमा सेवन गर्ने हो भने शरीरलाई फाइदैफाइदा मिल्छ स्वास्थ्य . जीवनशैली१९ फागुन २०७६
गाजर एक फाइदा अनेक गाजरमा उच्च मात्रामा बेटा क्यारोटिन पाइन्छ । यसका साथै भिटामिन ए, मिनरल्स र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ । यो आँखा, छाला, पाचन प्रणाली र दाँतका लागि लाभदायी हुन्छ स्वास्थ्य . जीवनशैली१६ फागुन २०७६
दूध र जुसजस्तै प्राकृतिक हुन्छ बियर, यी हुन् पिउँदाका ९ फाइदा बियर दूध र जुसजस्तै प्राकृतिक हो । यसमा कुनै मिसावट हुँदैन । सीमित मात्रामा बियर पिउँदा विभिन्न समस्याबाट समाधान पाउन सकिन्छ स्वास्थ्य . जीवनशैली१४ फागुन २०७६
पीएचडी गरेपछि कक्षा ४ को जाँच ! ‘बुद्धको उपदेश मनपर्ने भएकाले पढेकी हुँ । १० कक्षासम्म पढ्ने सोचेकी छु’, तरा भन्छिन्, ‘अब कति पो समय बाँचिएला र ! हात खुट्टा चलेसम्म त पढ्ने हो’ फिचर . जीवनशैली१० फागुन २०७६
प्रेमको प्रतीक गुलाब गुलाब एउटा फूलको प्रजाति हो । यो फूल विश्वकै प्रसिद्ध फूल हो । गुलाबको फूल धेरै रङका हुन्छन् । गुलाबको हरेक रङको आआफ्नै अर्थ हुन्छ । प्रेम दिवसमा आफ्नो प्रेमीप्रेमिकालाई गुलाब दिएर प्रेम व्यक्त गरिन्छ जीवनशैली२ फागुन २०७६
खाना खानेबित्तिकै गर्न नहुने कामहरू खाना खाएपछि बाहिर निस्किहाल्ने बानी धेरैको हुन्छ । तर, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले भने यो राम्रो होइन । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार खानापछि केही समय आराम गर्नुपर्दछ । त्यसैले, बिहान खाना खाएपछि १५/२० मिनेट आराम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य विद्हरूको सुझाव छ । जीवनशैली२९ माघ २०७६
यी हुन् खाली पेटमा खान नहुने खानेकुरा खासगरी खाना तथा खाने समयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । केही खाद्य वस्तुमा एसिडको मात्रा बढी हुन्छ । यस्ता खाद्यपदार्थ नियमित खानाभन्दा अगाडि सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउँछ स्वास्थ्य . जीवनशैली२७ माघ २०७६
लेखासमितिका सभापति खड्काद्वारा गाडीलगायत सेवा सुविधा फिर्ता